Sahitya – Page5– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
अहिले यतिबेला म कमरेड गमबहादुर मोक्तान ‘पहाड’ को क्रान्तिकारी जीवन, जहाँ उहाँ सबै परीक्षाहरूमा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनुभयो, को स्मरण गरिरहेको छु । उहाँ नेपाली क्रान्तिको एक होनहार व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । यस पटक उहाँको क्रान्तिकारी निष्ठा र योगदानसहित उहाँको संक्षिप्त जीवनीका केही हरफ कोर्ने जमर्को गरेको छु । कमरेड गमबहादुर मोक्तान ‘पहाड’को नाम उच्चारण गर्दा […]
ए शासकहरु हो ! तिमीलाई देश दुख्छ भने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा मलम लगाऊ तिमीलाई देश चहराउँछ भने पुनर्बास, महलिसागर र खुर्दलोटनबाँधको उपचार गर तिमीलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको पीडा छ भने विस्तारवादी नाङ्गो हस्तक्षेपका विरुद्ध लड तिमीलाई जनताप्रति समवेदना छ भने सुन कान खोलेर सुन उनका आर्तनाद कथा र ब्यथा सुन अनि राष्ट्र र जनताप्रति […]
शहीद शारदालाई सम्झँदा
इतिहासका गर्भमा धेरै कुराहरू बिलीन भएर गए, धेरै आफन्तहरू गए । धेरै परिचितहरू गए, अपरिचितहरू त कति गए कति ? मायामोहका कारण आफन्तहरू र परिचितहरूको सम्झना भने लामो समयसम्म बसिरहँदो रहेछ । बेला बखत ती आफन्त र परिचितहरूको सम्झना हुँदा मुटु गाँठो परेर आउँछ । नमिठो पीडाले मनलाई छुन्छ र आँखाका डिलडिलबाट आँशु पोखिन खोज्छन् […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Bichar, mainNews, Sahitya, फ्लयास ब्याक
प्रलेसबारे केही कुरा
मूलबाटोमा अर्को प्रलेस गठनको तयारी भन्ने समाचार प्रकाशित भयो । उक्त समाचारले केही तरङ्ग ल्यायो । विशेषतः सो समाचारले सत्तापक्षका साथीहरु र प्रलेसका बहालवाला साथीहरुमा केही भ्रम पर्यो र साथीहरु उत्तेजित पनि हुनुभयो । मूलबाटोलाई भ्रमपूर्ण र कपोलकल्पित समाचार छाप्यो भन्ने प्रतिक्रिया पनि दिए साथीहरूले । कतिपयले व्यङ्ग्य शैलीमा र कतिपयले सोझै टिप्पणी गरे । […]
काठमाडौं । अखिल नेपाल जनसाँस्कृतिक महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । महासंघका अध्यक्ष इश्वरचन्द्र ज्ञवालीको अध्यक्षता तथा सञ्चालनमा सम्पन्न बैठकले समसामयिक साँस्कृतिक विषयहरुमा व्यापक छलफल गरी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले वर्तमान राज्यसत्ताले निश्चित राजनीतिक दलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फासिवादी शैलीको भएकोले र गणतन्त्रमा पनि विचारको निषेध गरिएको हुँदा त्यसको तीव्र विरोध […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Bichar, National News, Politics, Sahitya, फ्लयास ब्याक
देशको सीमा खोज्दा
यो देशको सरकार कस्को सोध्नु पर्ने भयो हराएका सीमाहरु खोज्नुपर्ने भयो घुम्यौ हामी अभियानमा मेचीमहाकाली अनुगमन गर्यौं हामी सीमा वारिपारि थेन कतै जङ्गे पिलर खै त कता गयो हराएका सीमाहरु खोज्नुपर्ने भयो यो देशको सरकार कस्को सोध्नुपर्ने भयो हराएका हाम्रा सीमा खोज्नुपर्ने भयो यो देशको सरकारले आँखा देखेन कि जनताहरु कराएको कान सुनेन कि मालिक […]
‘अन्त्य’ सम्बन्धी शून्यवादी चिन्तन : एक दार्शनिक सन्दर्भ
नित्से : दार्शनिक दृष्टिले उत्तर आधुनिकतावाद अन्त्यका दर्शनमा आधारित छ । अथवा यसो भनौं यसको दार्शनिक पीठिका शून्यवादी दर्शन हो, जसका प्रणेता फ्रेडरिक विल्हेम नित्से (१८४४ –१९००) हुन् । डेरिडाली उत्तर संरचनावाद र फुकोइअन उत्तर संरचनावाद दुवैको दार्शनिक आधार नित्सेको शून्यवादी दर्शन हो (जिमा १४८, १५०) । फुकोले त आफै “म नित्सेवादी हुँ” भनेका […]
Posted in: Bichar, mainNews, Sahitya
म ब्रिटिश साम्राज्यको भ्रमबाट यसरी मुक्त भए
मेरो बाबा भनेको अंग्रेजको पक्षमा लडाइँ लड्दालड्दा युद्ध सकिएपछि अलिकति कपडा र बाटो खर्च दिएर फौजबाट बिदाइ गरिको योद्धा हो । उहाँले आउँदा लिएको लडाइँमा पाएका नौवटा मेडलहरु अहिले मसँग छन् । मैले बेलाबेलामा यी मेडलहरु हेर्दछु । मेडल किन्न थुप्रै मानिसहरु आए । तिनीहरुले सक्कली हो कि नक्कली भनेर तेजाब लगाएर पनि हेर्ने गरे […]
झर्रोटर्रो : कैलुवार्ता
यतिखेर नेपाल कमाउ पाटी (नेकपा)को थाई कमिटीको अस्थाई गलफत्ती बैठक सकिएको छ । बैठकमा निकै तगडासित पँधेरे झगडा भयो । दुई थान अध्यक्ष र त्रिचालीस थान सदस्यहरू भएको निज कमिटीको बैठकमा निकै गरमागरम घोचपेच र दाउपेच भयो । एक नम्बरी अध्यक्षको त सातो लिनेगरी घोचपेच भयो । दुई नम्बरीले भने दाउपेच लिने हिरक अवसर पाए […]